घर / नल गाईड / कसरी म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चर सफा गर्ने
2021 / 01 / 28 वर्गीकरणनल गाईड 3342 0
घर सजावट प्रवृत्ति जीवनको अन्य कुनै पनि भागमा फेसन जस्तै हेडस्टाइलमा ज्वारको साथ बदल्छ। अझै, त्यहाँ केहि सजावट तत्वहरू छन् जुन वर्षौंदेखि ट्रेन्ड भइरहेको छ रोक्नको कुनै संकेतको साथ। म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चर तिनीहरू मध्ये एक हो।
मैट कालो अमेरिका र संसारभरि घरहरूमा एक अत्यधिक लोकप्रिय प्रवृत्ति हो। यो एक स्पष्ट आधुनिक र उच्च-वर्गको लुक हो जुन घर मालिकहरूले टाढा-टाढा मन पराउँछन्। निस्सन्देह, यो केवल उत्तम देखिन्छ यदि यसलाई सफा र ताजा राखिएको छ। तपाइँ कसरी त्यो लामो-अवधि देखिने देख्नुहुन्छ?
जबकि म्याट कालो फिक्स्चर अधिकांश फिक्स्चर समाप्त भन्दा कायम राख्न सजिलो हुन्छ, त्यहाँ केहि नियमहरू र दिशानिर्देशहरू छन्। यो गाईडले तपाईलाई देखाउँदछ कसरी म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चर सफा गर्ने र तपाइँ तपाइँ तपाइँको फिक्स्चर नयाँ हेर्न र तपाइँको बाथरूम विलासी देख्न राख्न जान्नु आवश्यक सबै कुरा दिन्छ।
यो किन महत्वपूर्ण छ मैट कालो बाथरूम फिक्स्चर?
मैट ब्ल्याक बाथरूम फिक्स्चर सफा गर्नको लागि के गर्नु हुँदैन
तपाईंको बाथरूम फिक्स्चरको आन्तरिक पार्ट्स सफा गर्दै
तपाईंको म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चरको लागि हेरचाह गर्दै
१. मैट कालो बाथरूम फिक्स्चर सफा गर्नु किन महत्त्वपूर्ण छ?
जब यो तपाईंको फिक्स्चरको बाह्य भागमा आउँदछ, तिनीहरूलाई सफा गर्दा प्राय: उनीहरूको ताजा-देखि-बाकस देख्न मद्दत गर्दछ। तपाईका फिक्स्चरको सौंदर्यशास्त्रबाट मात्र पानीको ठाउँ र अवशेषहरू लिन्छन्, तर यी अवशेषहरूमा केमिकलहरू हुन्छन् जुन समाप्तमा टाढा रहन सक्छ। तुरुन्तै तिनीहरूलाई सफा गर्नाले तपाईंलाई तपाईंको फिक्स्चरमा लामो अवधिको क्षति रोक्न मद्दत गर्दछ।
जबकि तपाईंको फिक्स्चरको बाहिरी भागको लागि यो सत्य हो, तपाईंको फिक्सचरको भित्री सफा गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण छ। नल र ड्रेनहरू एकै किसिमले बन्द गर्न सक्छन्, तपाईंको महत्त्वपूर्ण फिक्स्चरहरू कम कार्यात्मक बनाउँदै। धेरै जसो केसहरूमा, सफाई सफा तालिकाले ती समस्याहरूलाई रोक्न सक्छ।
तपाइँको म्याट कालो फिक्स्चर प्राय: कसरी सफा गर्ने
हामी सबै व्यस्त जीवन गर्छौं, त्यसो भए तपाईले कति पटक आफ्नो फिक्स्चर सफा गर्न समय लिनु पर्छ? भाग्यवस, उनीहरूको बाह्य सफा तपाईंको साप्ताहिक सफाई दिनचर्यामा समावेश गर्न सजिलो छ, प्रत्येक बाथरूममा पाँच मिनेट वा कम समय लिँदा।
तपाईंको फिक्स्चरको आन्तरिक क्षेत्रहरू सफा गर्न केही थप मिनेटहरू लिन्छन्, तर प्राय जसो १-15-२० मिनेट नुहाउने बाथरूमको लागि पर्याप्त हुन्छ र एक वा दुई डब्स यदि तपाईं नियमित सफाइ सत्रहरू जारी राख्नुहुन्छ भने। यी केवल प्रत्येक महिना मा एक पटक सफा गर्न आवश्यक छ वा यति धेरै ग्रिड निर्माणलाई नियन्त्रणमा राख्न।
म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चर सफा गर्नेमा शीर्ष चुनौतीहरू
म्याट कालो फिनिश बरु टिकाउ हुन जान्छ, त्यसैले तिनीहरू सफा गर्न को रूप मा अन्य केहि समाप्त छैन। अझै, दिमागमा राख्नुपर्ने केही चुनौतीहरू छन्।
म्याट समाप्त राख्दै
केही सफाई उत्पादनहरू सफा र सेनिटाइज मात्र होइन तर चमक थप्नका लागि पनि डिजाइन गरिएको हो। त्यो तपाइँको काउन्टरटप्समा चाहानु हुने कुरा हुन सक्छ, तर तपाइँको म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चरमा होइन। तपाईंले उत्पादनहरू प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ जुन म्याट अक्षुण्ण छोडिनेछ।
पानीको स्पटहरू हटाउँदै
म्याट कालो फिक्स्चरको फाइदा यो हो कि तिनीहरूले पानीको दागहरू सजिलैसँग देखाउँदैनन् जस्तो क्रोम वा पालिश काँसा जस्ता उच्च-चमक समाप्त हुन्छ। पानी स्पटहरू अझै देखा पर्छ, यद्यपि, र तपाईं तिनीहरूलाई सफा गर्न चाहानुहुन्छ जब ती गर्छन्।
ती पानीका ठाउँहरू फिक्स्चरमा तपाईंको मानक धुलो र अन्य कणहरू भन्दा ट्रिकर र अधिक स्थिर हुन्छन्। यो त्यस्तो तरिकाले सफा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जुन पानीको दागहरू हटाउनको लागि पर्याप्त शक्तिशाली छ तर समाप्त नत्रबाट बच्नको लागि कोमल।
२. मैट ब्ल्याक बाथरूम फिक्स्चर सफा गर्नको लागि के गर्नु हुँदैन
तपाइँको म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चरलाई उनीहरूको उत्तम रूपमा हेर्नको लागि, त्यहाँ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशहरू छन् पालना गर्नका लागि, उत्पादनहरूबाट विशेष प्रविधिहरूमा प्रयोग गर्न। निराधार, क्षति-रहित फिक्स्चर प्राप्त गर्न यी सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्।
एक साधारण साबुन समाधान प्रयोग गर्नुहोस्
त्यहाँ धेरै रसायनहरू छन् जसले म्याट ब्ल्याक फिनिशलाई नोक्सान गर्न सक्दछ, वाणिज्य सफाई उत्पादनहरूमा फेला परेका धेरै रसायनहरू सहित। यी फिक्स्चरहरू सफा गर्ने सबैभन्दा सुरक्षित र सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका के हो? साधारण साबुन पानी।
एउटा बाल्टिन भर्नुहोस् वा पानीले डुब्नुहोस् र मानक डिश साबुनको ड्यास थप गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि यो पीएच-सन्तुलित डिश साबुन हो ताकि यो एसिडिक न हो। यसलाई मिक्स गर्नुहोस्, साबुनको पानीमा कपडा डुबाउनुहोस्, र यसलाई आफ्नो फिक्स्चर मेटाउन प्रयोग गर्नुहोस्।
एसिड प्रयोग नगर्नुहोस्
तपाईको म्याट कालो फिक्स्चरमा सँधै एसिडहरू प्रयोगबाट जोगिनु महत्त्वपूर्ण छ। यी एसिडहरू फिनमा टाँसिन सक्दछ, यदि फिक्स्चर उच्च गुणवत्ताको निर्माताबाट आयो भने पनि। यो क्षतिग्रस्त समाप्त को असमान splotches पछाडि छोड्न सक्नुहुन्छ।
केवल अपवाद मात्र हो कि तपाईं सिरका प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं जिद्दी पानीको स्पटहरू हटाउनुहुन्छ। यद्यपि, सिरकालाई भारी पातलो बनाउनुपर्दछ र क्षतिबाट बच्न रणनीतिहरू छन्, जुन हामी तल तल खन्नेछौं।
सफा गर्न कोमल कपडा प्रयोग गर्नुहोस्
कुनै पनि प्रकारको फिनिशले खरोंचहरू विकास गर्न सक्छ, र कालो म्याट यसको अपवाद छैन। पनी ब्रश, स्काउरी pad प्याडहरू र रफ स्पन्जजस्ता सामान्य सफाई उपकरणहरूले पनि तपाईंको फिक्स्चर स्क्र्याच गर्न सक्दछन्। तपाइँको फिक्स्चर सफा गर्दा प्रयोग गर्ने उत्तम उपकरण भनेको एक साधारण माइक्रोफाइबर कपडा हो।
भरिने एजेन्टको साथ मोम वा सफाई उत्पादनहरू प्रयोग नगर्नुहोस्
यो त्यस्तो टिप हो जुन धेरै व्यक्तिले महसुस गर्दैनन्, तर यो म्याट फिनिशको साथ महत्वपूर्ण छ। उत्पादकहरूले बम्प्स, रेवजहरू, र उपत्यकाहरूको माइक्रोस्कोपिक बनावट थपेर एउटा म्याट फिनिश सिर्जना गर्दछ। जब प्रकाश सतहमा हिट गर्दछ, यो बनावट प्रकाश छ कि ताकि कुनै कडा प्रतिबिम्ब तपाईं को चिकनी सतह मा देख्न को लागी।
मोम, गिलास सफा गर्ने, र केहि अन्य उत्पादनहरूले भरिने एजेन्टहरू समावेश गर्दछ। यी अवयवहरूले सतहमा रेवजहरू भरेर यसलाई चमकदार बनाउँदछन्। जबकि त्यो ऐना र ग्रेनाइट काउन्टरटप्सको लागि उपयुक्त छ, यसले म्याट कालो फिनिस - वा कुनै म्याट फिनिशमा blotchy विसंगति सिर्जना गर्दछ।
तुरुन्तै फिक्स्चर कुल्नुहोस्
जब तपाईं आफ्नो म्याट कालो फिक्स्चर थाल साबुनले धुनुहुन्छ, यो पानीको साथ तुल्याउनु पर्छ र राम्ररी सुकाउनु पर्छ। यसले तपाईंलाई कुनै पनि पानीको धब्बा वा अवशेषहरूलाई पछाडि रहन र तपाईंको नयाँ सफा गर्ने काम बर्बाद गर्नबाट रोक्न मद्दत गर्दछ। फिक्स्चरहरू नरम, सफा माइक्रोफाइबर कपडाको साथ सुक्खा सम्झनुहोस् कुनै न कुनै र बनावट प्रयोगको सट्टा।
सामान्य प्रयोजन क्लीनर प्रयोग नगर्नुहोस्
जब तपाईं सामान्य-उद्देश्य वा सबै उद्देश्यको बाथरूम क्लीनरको रूपमा लेबल गरिएको उत्पादन देख्नुहुन्छ, तपाईं सोच्नुहुन्छ, "यो सजिलो छ, म यसलाई बाथरूममा कुनै पनि चीजमा प्रयोग गर्न सक्दछु।" यो "कुनै पनि" एक overstatement को एक बिट हो कि बाहिर जान्छ।
यी उत्पादनहरूमा प्राय त या त एसिड, भरिने एजेन्ट, वा दुबै हुन्छन्। जबकि यी सामग्रीहरू प्राय: सतहहरूको लागि ठीक छन्, तिनीहरूले एक म्याट ब्ल्याक फिनिशलाई नोक्सान गर्न सक्दछन्, विशेष गरी दोहोर्याइएको साप्ताहिक प्रयोग पछि।
अन्तमा, जबसम्म तपाईं क्लिनरमा सबै सामग्रीहरू जान्नुहुन्न र निश्चित हुनुहुन्छ कि तिनीहरू मध्ये कुनैले पनि जोखिम लिदैन, यो स्पष्ट हुनु राम्रो हो। डिश साबुनले तपाइँको फिक्स्चरहरू सफा गर्ने काम गर्दछ ताकि त्यहाँ कडा क्लीनरको आवश्यकता पर्दैन। यदि तपाईं सफाई उत्पादन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, जे होस्, यसलाई तुरुन्तै पखाल्नुहोस् र तत्काल पानीको साथ सुकाउनुहोस्, जस्तै डिश साबुन प्रयोग गर्ने सल्लाह दिईएको छ।
आन्तरिक सतहहरू भन्दा पहिले बाहिरी सतहहरू सफा गर्नुहोस्
जब व्यक्तिहरूले बाथरूमको फिक्स्चर सफा गर्ने सोच्दछन्, तिनीहरू पहिला बाहिरी सतहहरूको बारेमा सोच्छन्। आन्तरिक सतहहरूलाई पनि ध्यान आवश्यक छ, यद्यपि यदि तपाईं आफ्नो फिक्स्चरहरू राम्रो आकारमा राख्न चाहनुहुन्छ र राम्रोसँग चल्दै हुनुहुन्छ।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाईं समान कपडाले बाहिरी र भित्री सतहहरू सफा गर्दै हुनुहुन्छ, जे होस्, पहिले बाहिरी सतहहरू सफा गर्नुहोस्। आन्तरिक क्षेत्रहरू क्याल्शियम र चूना निक्षेप, ग्रिम र अन्य कणहरूको निर्माणमा बढी प्रवण हुन्छन्। यदि तपाइँ ती कणहरू तपाइँको फिक्स्चरको बाहिरी सतहहरूमा बोक्नुहुन्छ भने, तिनीहरूले खरोंच गर्न वा अन्त्यमा समाप्त गर्न सक्दछन्।
भिइनगर प्रयोग गरेर ओभरबोर्डमा नजाउनुहोस्
हामीले माथि उल्लेख गरेझैं, सिरका मात्र अम्ल हो कि तपाईले आफ्नो म्याट कालो समाप्त गर्न प्रयोग गर्नुपर्दछ, र केवल विशेष परिस्थितिहरूमा। यो जिद्दी पानी धब्बा हटाउन को लागी राम्रो काम गर्दछ तर सावधानीपूर्वक यस प्रक्रिया अनुसरण गर्नुहोस्।
पहिले, भिनेगर पातलो। %०% सिरका र %०% पानीको घोल सामान्यतया प्रभावकारी हुन्छ तर क्षतिबाट बच्न पर्याप्त कोमल काम गर्दछ। यस समाधानमा नरम माइक्रोफाइबर कपडा डुब्नुहोस् र पानीको दागहरू बिस्तारै मेटाउन यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
तुरुन्तै तपाइँ सिरका को कुनै पनि ट्रेस बाँकी हटाउन पानी संग स्थिरता राम्रो कुल्ला। अन्तमा, यसलाई सफा माइक्रोफाइबर कपडाले सुकाउनुहोस्।
तपाईंको निर्माणकर्ताका निर्देशनहरू पढ्नुहोस्
जब तपाईको बाथरूमको फिक्स्चरको हेरचाहको बारेमा श doubt्का लाग्छ भने, सँधै निर्माताको निर्देशनहरू फर्काउनुहोस्। अधिकांश निर्देशन पुस्तिकाहरू अनलाइन उपलब्ध छन् यदि तपाईंले आफ्नो मूल प्रतिलिपि राख्नुभएन भने।
बिभिन्न निर्माताहरूले कहिलेकाँही म्याट कालो समाप्त गर्नका लागि बिभिन्न सामग्री र प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन्। त्यस कारणका लागि, तिनीहरू राम्ररी जान्दछन् कि कुन प्रकारका उत्पादनहरू र प्रविधिहरूले उनीहरूका फिक्स्चरहरू प्रभावकारी रूपमा सफा गर्नेछन् क्षतिको जोखिम बिना।
धेरै बाथरूम फिक्स्चर केहि प्रकारको निर्माताको वारंटीको साथ आउँदछन्, र केहि अवस्थाहरूमा निर्माताको हेरचाह निर्देशहरूबाट टाढा राख्दा तपाईंको ग्यारेन्टी शून्य हुन्छ। माफ गर्नु भन्दा सुरक्षित हुनु सँधै राम्रो हुन्छ।
Your. तपाईंको बाथरूम फिक्स्चरको आन्तरिक पार्ट्स सफा गर्दै
हामीले उल्लेख गरेझैं तपाईको बाथरूमको फिक्स्चरको बाहिरी भाग उनीहरूको उत्तम देखिएको राख्नु महत्वपूर्ण छ, तर तपाईले समय समयमा तिनीहरूको भित्री सफा गर्नु पर्छ। त्यो कुनै पनि स्थिरताका लागि जान्छ जुन आन्तरिक भागहरू, जस्तै नाली र faucets कि aerators छ।
तपाईंको नल एरेटर सफा गर्दै
एक एररेटर तपाईंको नलको भित्र सानो टुक्रा हो जुन राम्रो स्क्रिन जस्तो देखिन्छ। यसले पानीको प्रवाहमा हवा हाल्दै गर्दा तपाईंको पानीबाट केही कणहरू फिल्टर गर्दछ जसले यो स्मूथ स्ट्रिम गर्दछ। वायुवाहकको रूपमा चलाखीको रूपमा, यसले केही कण निर्माणको विकास गर्न सक्दछ त्यसैले यसलाई समय-समयमा सफा गर्न आवश्यक पर्दछ ताकि यसले पानीमा आउनबाट रोक्दैन।
धेरै जसो faucets मा, aerator तपाईंको नल भित्र एक सानो स्क्रूकेप भित्र छ, सामान्यतया नल टाउकोको तल बाहिर अलि पर टाँसिएको। तपाईं यसलाई हटाउनको लागि प्राय: यस क्यापलाई अनस्क्रुभ गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि यो सुनिश्चित गर्न तपाईंको निर्माताका निर्देशहरू जाँच गर्न उत्तम हुन्छ।
२. तपाईंको सफाई समाधान सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईं म्याट कालो बाहिरीहरूका लागि प्रयोग समान सफाई समाधान प्रयोग गर्नुहोस्: डिश साबुन र पानी। यसलाई तपाईंको सिink्क वा बाल्टिनमा मिलाउनुहोस् र तपाईं जान तयार हुनुहुन्छ।
कपडा, स्क्रब ब्रश, स्पन्ज, वा पुरानो टुथब्रश प्रयोग गरेर सफा र बिल्डअप सुस्त बनाउन साबुन पानीमा एर्रेटर स्क्रब गर्नुहोस्। यसलाई बारम्बार पखाल्नुहोस्, ढिलो कणहरू हटाउँदै। एक साधारण दृश्य निरीक्षण तपाईंलाई बताउँछ जब aerator सफा छ।
तपाईं पनि यो अवसर आफ्नो नल भित्र ताजा गर्न को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनभने aerator सामान्यतया यसलाई ब्लक गर्दै। त्यो डिश साबुन र पानीको साथ एक पुरानो टुथब्रश लिनुहोस् र नलको भित्री भागमा स्क्रब गर्नुहोस्। पूर्ण काम गर्नको लागि तपाईलाई केहि ईन्चमा जान आवश्यक छ।
E. एररेटर बदल्नुहोस्
एर्रेटरको टुक्राहरू फेरि सँगै राख्नुहोस् ती क्रमहरूमा मिलाउनु भयो जब तपाईं तिनीहरूलाई हटाउनुहुन्थ्यो। निश्चिन्त निर्माताको निर्देशन जाँच गर्नुहोस् यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न। बस यो भेला स्क्रूकेप फिर्ता ठाउँमा फिर्ता पेस र तपाईं समाप्त भयो।
तपाईंको बाथरूम नाली सफा गर्दै
सिन्क ड्रेन र नुहाउने नालीहरू दुबै तपाईंको बाथरूमको फिक्स्चरको आवश्यक भाग हो, र तिनीहरूलाई प्राय: राम्रो सफा आन्तरिक सफाई चाहिन्छ। कहिलेकाँही ड्रेनले तपाइँलाई यो समय बिस्तारै पानी निकाल्ने वा खराब गन्ध विकास गरेर बताउँदछ। यदि तपाईं यी लक्षणहरू देख्नुहुन्न भने पनि, यो तपाईंको ड्राईन्स प्रत्येक महिना सफा गर्न मद्दत गर्दछ वा यसैले क्लोग्सको शीर्षमा रहनको लागि।
१. निकासी हटाउनुहोस्
सिन्क ड्रेनको मामलामा, तपाईं सामान्यतया हातले ड्रेनको बीचमा अनसक्रु गर्न सक्नुहुन्छ। केही नुहाउने नालीहरूको मामलामा, त्यहाँ सानो स्क्रू हुन सक्छ जुन तपाईंले साधारण स्क्रू ड्राईभरको साथ हटाउनु पर्छ।
२. कुनै पनि आन्तरिक ब्लग हटाउनुहोस्
तपाईं कुनै पनि हार्डवेयर स्टोरबाट एक क्लग रिमूभर उपकरण लिन सक्नुहुन्छ। यो लामो, पातलो, लचिलो स्टिक हो, प्राय: प्लास्टिकले बनेको, हुकसहित कपालहरू र अन्य ड्रेन-क्लग्जिंग मलबेहरू समात्न। यस उपकरणलाई नालीमा स्लाइड गर्नुहोस् र नालीको पहिलो धेरै फिटहरू भित्र कुनै प clo्क्तिहरू हटाउन यसलाई माथि तान्नुहोस्।
Round. वरिपरि सफा गर्नुहोस् र भित्र भित्र फाल
कुनै गडबडी क्लगहरू गयो भने, तपाईंको माइक्रोफाइबर कपडा र साबुन पानी प्रयोग गर्नुहोस् ड्रेनको किनारा वरपर सफा गर्न र नालीको धेरै माथि। तपाईंले मूल रूपमा हटाइएको ड्रेन पीस सफा गर्न नबिर्सनुहोस्।
The. ड्रेनलाई पुन: एकत्रित गर्नुहोस्
ड्रेन सफा र ताजाको साथ, यो ठाउँ फिर्ता पेस गर्न र तपाईंको ताजा, भराई-मुक्त नालीको आनन्द लिने समय हो।
Your. तपाईंको म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चरको हेरचाह गर्दै
म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चरमा साँच्चै लक्जरी र शोधनको लगत छ। अझै, आइटमहरू मध्ये सबै भन्दा सुन्दर पनि unkmitted देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं यसलाई सफा राख्नुहुन्न र यसलाई राम्रोसँग हेरचाह गर्नुहुन्छ भने। यस गाइड अनुसरण गर्नुहोस् तपाईको म्याट कालो फिक्स्चर उनीहरूको उत्तम देखिन्छ र आउँदो बर्षको लागि सबैमा ठूलो प्रभाव पार्दछ। यदि तपाईं अझै सही फिक्स्चरको लागि किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ भने, हाम्रो बाथरूम स्थिरता खरीद मार्गनिर्देशकहरू जाँच गर्नुहोस्।
म्याट कालो बाथरूम नल उत्पाद सिफारिस गरियो
ड्रेन असेंबली म्याट कालोको साथ सेन्टरसेट बाथरूमको नल
म्याट कालो बाथरूम नल4ईन्च केन्द्र
ट्यागम्याट कालो बाथरूम फिक्स्चर	अघिल्लो :: बाथरूम नलका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय समाप्त के हो? अर्को: कसरी बाथरूम नल छनौट गर्न: २०२१ खरीद गाईड
2021 / 05 / 13 1538
2021 / 05 / 09 1226
2021 / 05 / 08 1063
2021 / 02 / 04 942
2021 / 02 / 03 950
2021 / 02 / 03 980